Beluga iyo Dreamlifter
Beluga iyo Dreamlifter sano 3 5 bilood ka hor #48
Airbus ayaa bilaabatay shirkii ugu dambeeyay ee Beluga cusub, oo hadda lagu saleeyo A330-200. Taasi waxay igu noqotay fikradda .... miyay u kala duwanaan karaan? Taas waxaa loo yaqaan 'Boeing 747 Dreamlifter'.
yara adag tahay inaan helo si ay u fahmaan go'aanka ku qaataan boqolaal kun, haddii aan malaayiin dollar, euros ... wax kasta si ay u horumariyaan Beluga cusub. Aan u noqdo mid khalad ah, laakiin, ma waxaa ka hawl yar in wax laga beddelo A380 ee doorka in?
Waa maxay waxaad opinion on this?
Beluga iyo Dreamlifter sano 3 5 bilood ka hor #49
Waxaan qabaa LCF ku saabsan tahay sida weyn sida qof kasta u baahan yahay inuu tago ilaa xamuulka xamuul mugga Cade. A380 ayaa halaagsameen lahaa isagoo diyaarad Misbaax eg-An 225 ah.